Uqikelelo luka-2009: uPhando kunye neeFowuni zexesha elizayo Martech Zone
Uqikelelo luka-2009: uPhando kunye neMfonomfono lixesha elizayo
NgoMgqibelo, Novemba 8, 2008 NgoMvulo, nge-14 kaJanuwari, 2013 Douglas Karr
Ukususa kum intetho kukuba ukusetyenziswa kwefowuni kuyaqhubeka nokufumana ukwamkelwa, kubonelela ngendlela entsha yeenkampani ukufikelela kubathengi bazo. Kungenxa yoko le nto ndinethemba ukudibanisa ukuthengisa okuhambayo kwiindawo zakho kunye nemikhankaso eneefemu ezinje ngeSelfowuni.
Ukongeza, izilayidi zibonelela ngobungqina obuninzi bokuba ukukhula kweNtengiso yokuKhangela (organic kunye nokuhlawula ngokucofa nganye) kuya kuqhubeka kuqhuma ekukhuleni ngenxa yeziphumo ezinokulinganiswa kunye nembuyekezo entle kutyalo-mali. Esona sizathu siphambili sokuba ndifudukele kwisikhundla sam kwiCompendium Blogware, a iqonga lokubhloga ngokubumbana elinikezela zombini isicelo kunye noqeqesho olufunekayo kumashishini ukuze afumane ukubekwa kwindawo yokukhangela.
Kwibala lokuHlawula ngokuCofa, ndinabahlobo ababini - iPat East e Ukuthengiswa kweHanapin kwaye UChris Bross kwi-Evereffect -Abakhula ngokukhawuleza kwaye baqhuba imikhankaso ye-PPC ehlanganisiweyo eqhubeka nokubonelela ngembuyekezo elungileyo kutyalo-mali kubathengi babo.
tags: ukukhangela okuhlawulelweyoiarhente yokukhangela ehlawulelweyoHlawula ngokucofa kanyePPCIarhente ye-ppc
Ukwabelana ngokusilela kwam (kunye nempumelelo?)